Cunnooyinka ku yaal Heels-makhaayadaha horudhaca ah! - Cuntooyinka giraangiraha
Cunnooyinka Cidhibtirka Falanqaynta meegada weyn ee makhaayadaha!
Sanadkaan Cunnooyinka Ciribta safka makhaayadaha ayaa la dhigay! Cunnadu marwalba waxay udub dhexaad u tahay xafladaheena xagaaga weyn si aan u taageerno Cuntooyinka Lugaha Lugta iyadoo safka sanadkaanna uu noqon karo kan ugu wanaagsan weli! Akhriso si aad u aragto mid kasta oo ka mid ah 13-ka makhaayadood ee nagu soo biiraya Jasiiradda Nicollet Agoosto 15 ay keenayaan si ay ula wadaagaan martidayada. Tigidhkaaga wuxuu kuu ogolaanayaa inaad tijaabiso dhamaantood si aad ugu faraxdo qalbigaaga!
Shayga menu: Juicy Lucy
Guriga caanka ah ee Juicy Lucy, 5-8 Club, ayaa ku laaban doona Cunnooyinka Cidhibtiina! Naadiga 5-8 wuxuu waqti dheer taageere u ahaa Cunnooyinka Gawaarida, maadaama ay joogeen dhacdadii ugu horreysay ee Cunnooyinka dhacdooyinka Heels ee 2009 (waxayna qeyb ka ahaayeen toddobo cunno oo kale dhacdooyinka Heels tan iyo markaas). Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helno qaybtan Minnesota ee aadka loo jecel yahay ee Meals on Heels! Marka xigta ee aad fiirineyso burger iyo biir, madax ka noqo mid ka mid ah maqaayadaha burger-ka ee maxalliga ah ee ku yaal Minnesota - Naadiga 5-8.
Shayga meenuga: Salad steak ah oo la dubay
Loop-ka magaalada Minneapolis, oo ku yaal meel wax yar u jirta Target Field, ayaa markii ugu horreysay ku soo bandhigi doona Meals on Heels! Loop waxaa lagu ammaanay jawigeeda weyn, cabbitaannada sida wanaagsan loo farsameeyay, iyo cunnada cunnada leh. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helno makhaayaddan firfircoon, ee ugu caansan Minneapolis, oo ah mid ka mid ah maqaayadaha noo muuqda.
Cilmiga Macaanka Ice cream
Shayga meenuga: Noocyo kala duwan oo dhadhanka jalaatada ah oo dalka lagu sameeyo
Ma jiraan wax ka fiican jalaatada maalinta kulul ee xagaaga Science Sayniska Macaan waxaa ka go'an sameynta jalaato dabiici ah oo aan lahayn xasiliyaal, dhadhan macmal ah, midab ama cirid. Adoo adeegsanaya sayniska cuntada iyo maaddooyinka dabiiciga ah waxay awood u leeyihiin inay isku dubbariyaan dhadhammo badan oo gaar ah. Abuuraha Sayniska Macaan, Ashlee Olds, wuxuu abuuraa oo tijaabiyaa dhammaan dhadhanka nafteeda, ka dibna waxaa lagu sameeyaa gacanta jikadooda St. Paul. Ice cream Sayniska Sayniska waxaa laga heli karaa St. Paul ee Keg iyo Case Market, Pop-ups-ka ay ku leeyihiin Delicata, iyo tafaariiqleyaal badan oo maxalli ah. Sayniska macaan wuxuu noqon doonaa ku darista saxda ah ee Cuntada safka makhaayadaha Heels mana sugi karno dhammaantiin inaad isku daydaan jalaatada noocan ah.
Cunnada Bariga & Cunnada ee Eli
Shayga menu: Caloosha doofaarka iyo edamame falafel slider
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in Eli's Cuntada Bariga & Cocktails ay ku soo laaban doonaan Meals on Heels! Muuqaalkoodii ugu dambeeyay ee Meals on Heels wuxuu ahaa mid lala dhacay, iyadoo kaqeybgalayaal badan ay codsadeen inay soo noqdaan. Makhaayaddan heerka sare ah ee aan caadiga ahayn waxay ku siisaa cunno aad u wanaagsan jawi diiran, saaxiibtinimo. U ruxrux iyaga oo ku yaal waqooyiga-bari ee Minneapolis is biirsaday ama isbuuc dhammaad ah!
Shayga meenuga: Digaagga la jarjaray iyo feeraha doofaarka
Beast BBQ, oo lagu soo kordhiyay goobta cuntada ee Minneapolis, ayaa sameyn doonta Cunnadeeda markii ugu horeysay Heels. In kasta oo Beast BBQ ay albaabada u furtay sannadkan, haddana waxay durba magac ku yeelanayaan nafaqooyinka ugu sarreeya ee ku yaal magaalada. Marka lagu daro cunnadooda macaan ee lagu cabbo geedkii geedkii Minnesota, waxay sidoo kale leeyihiin cabitaanno aad u wanaagsan oo ay ugu mahadcelinayaan iskaashigooda maxalliga ah ee ay la leeyihiin Rockfilter distillery, Headflyer Brewing iyo J. Carver Distillery. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helno makhaayaddan soo socota iyo tan soo socota, laakiin maahan inaad sugto ilaa Cunnada Cidhibtiyo laga cuno! Liiskooda buuxa iyo baarkoodu waxay furan yihiin illaa 2-da subaxnimo, marka ku rogmashada waqtiga xiga ee aad banaanka u baxayso waxaad raadineysaa xoogaa hilib-dub ah xilli dambe.
Shayga meenuga: Tres wuxuu xaaqaa keega
Jikada Fursadaha ayaa ah jiko u heellan uun adeegidda Cunto qaatayaasha Wheels ee aagga Twin Cities. Tan iyo markii la furay sanad ka hor iyadoo lala kaashanayo shaqaalaha furitaanka furan ee Minnesota ee cunnada karinta jikada ayaa si isdaba joog ah u koray. Kahor furitaanka Jikada Fursadaha dhammaan 32da barnaamij ee Cunnada Gaarka ah ee shakhsiyaadka ee xaafadda Metro waxay cuntadooda ka heleen dibedda shirkadaha cuntada. Iyada oo loo marayo mashruucan Cuntada Lugaha ayaa awood u leh in ay yareyso kharashyada isla markaana ay siiso caafimaad, ikhtiyaarro menuyo badan oo la beddeli karo. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu quruxda badan ee ku saabsan Jikada Fursadaha oo qayb ka ah Cunnooyinka Cidhib-tirka ayaa ah in ka-qaybgalayaashu ay iskood isugu dayi karaan nafahooda isla cuntada loo bixiyo kuwa qaata Cuntada Gawaarida Markaa inkasta oo aad haysatid kabahaaga ugu quruxda badan, waxaad weli awood u yeelan doontaa inaad gasho kabaha qof kale oo aad u aragto sida cuntada macaan ee cunnooyinka qaataha la siiyo!
Shayga meenuga: Tacos-ga gawaarida loo yaqaan
Jikada NOLO, maqaayada xaafadda oo ku taal bartamaha North Loop, ayaa markii ugu horreysay ka soo muuqan doonta Meals on Heels bisha soo socota! NOLO waxay ku takhasustay cuntooyinka lagu sameeyo waxyaabo fudud oo tayo sare leh. Marka lagu daro cuntadooda dhadhanka leh, waxay sidoo kale u adeegaan isugeyn is biirsaday gacmo lagu farsameeyay, biirka deegaanka iyo liis khamri kala duwan ah. Markaad booqato NOLO's waxaad si dhakhso leh u ogaan doontaa sida ay uga go'an tahay martigelinta Midwest iyo adeeg weyn. Jikada NOLO ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican ee cunnada aan caadiga ahayn, iyo haddii aad raadineyso meel cusub oo leh jawi baashaal leh, waxaad u baahan tahay inaad iska hubiso waxa hoose: Baarka Aasaaska.
Si fudud Steve ee
Shayga menu: Digirta madow ee quinoa burger
Si fudud Steve ee Cuntada Cuntada Wareegta ah ayaa mar kale nagu soo biiri doonta Cuntada Heellada! Ma aha oo kaliya inaan jecel nahay cunnada macaan ee ka soo baxda gaari xamuulkan, waxaan jecel nahay taageerada ka imaanaysa. Si fudud Steve wuxuu qayb ka ahaa dhacdooyinkeennii 7 sano hadda, oo had iyo jeer wuxuu hoos u dhigaa inuu siiyo Cunnooyinka Gawaarida si kasta ha noqotee. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helno gaari xamuul ah oo cabsi badan oo ficil ku jira Meals on Heels sanadkan. Si fudud Steve's marwalba wuu socdaa, markaa waad raaci kartaa gaariga xamuulka ah ee warbaahinta bulshada si aad u ogaato halka ugu dambeysa ee uu joogo.
Shayga menu: Maraq avokado la qaboojiyey oo leh salad carsaanyo iyo yaanyo leh
St. Paul Grill wuxuu mar kale nagala soo qayb geli doonaa fiid aan la ilaawi karin Meals on Heels! Aad ayaan ugu faraxsanahay taageeradooda joogtada ah ee Cuntada Wheels sanadaha oo dhan (iyo cunooyinkooda cajiibka ah, dabcan). Oh, oo miyaan sheegnay iyaga oo kaliya loo magacaabay makhaayada ugu sareysa St. Paul ee Mpls.St.Paul Magazine? Tan iyo markii aan ognahay inaadan sugi karin illaa ay dhacdo ka dhacdo, ayaa u doortay The St. Paul Grill habeenka soo socda.
Shayga meenuga: Beyond cheeseburger pizza, Pizza dabka neefsanaya, iyo Lucé
Meesha aad ugu jeceshahay inaad u gasho pizza-ka Minnesota, Pizza Lucé, waxay mar labaad ku siin doontaa pizza ay afka ka siinayaan Meals on Heels. Kani waa sanadkii 9aad ee ay nala shuraakoobeen sanad walbana waxay keenaan pizzas cusub oo gaar ah oo ay weheliyaan qaar ka mid ah taageerayaashooda caanka ah. Ma sugi karno inaan aragno waxa ay u keenayaan dhacdada sannadkan!
Shayga meenuga: Digaag tikka masala ah oo lagu googooyo rootiga naan
Makhaayada Gandhi Mahal waxay u keeni doontaa cuntadooda Bangladesh / Hindi ee Cuntada dadka ka soo qayb galaya Heels si ay mar kale ugu raaxaystaan! Tan iyo markii la furay 11 sano ka hor Gandhi Mahal waxaa si isdaba joog ah loogu amaanay inuu yahay mid ka mid ah maqaayadaha Hindida ee ugu wanaagsan magaalooyinka Mataanaha ah. Marka lagu daro cunnadooda wanaagsan, waxaan sidoo kale jecel nahay u heellanaanta bay'adda iyo dhaqammada waara. Inta badan cuntada laga isticmaalo Gandhi Mahal waxaa lagu beero beertooda bulshada dhexdeeda ama lagu iibsado gudaha. Waxay sidoo kale ka go'an tahay inay u abuuraan goob nabad ah meel ay isugu yimaadaan qof kasta oo kaga soo biira maqaayaddooda. Ka hubi Gandhi Mahal cuntadooda oo dhan-waad wada cuni kartaa laga bilaabo 11:30 subaxnimo ilaa 3:00 galabnimo ama waqtiga cashada.
Catrinas Cerveza iyo Hilibka Mexico
Shayga menu: Tostadas tinga tinga digaag
Catrinas Cerveza iyo Mexico Grill waxay bixiyaan cunno cusub oo dhab ah oo reer Mexico ah oo si dhaqso ah u socota. Dhammaan cuntadooda waxaa ku sameeya guriga milkiilayaasha iyo kuugga maalin kasta, oo ay ku jiraan tostadas digaag digaag leh oo dhadhan fiican leh kaas oo u diyaarin doona dhadhaminta Cuntooyinka Heellada. Waxaan ku faraxsanahay ku daritaankan ku saabsan Cunnooyinka Heels ee safka cuntada waxaanan dooneynaa inaan sidoo kale kugu dhiirrigelino inaad iska hubiso Catrinas, haddii ay ahaan lahayd Taco Talaado ama dhacdadaada xigta ee cuntada.
Shayga menu: Kala duwanaanta bundtinis
Dhadhamiyadeena dhadhanka ayaa u boodboodaya farxad kaliya ka fikirida macmacaanka ay cunnadan soo socota ee maqaayada Heels ay u keeni doonto dhacdada sanadkan. Cunto ku saabsan Heels jecel, Waxna ma leh Bundt Cakes, ayaa bixin doona keega-u-dhimashada-keega Meals on Heels 2019.
Halkan ku hel Cuntadaada tigidhada Cidhibtirka!
Ogosto 7, 2019